सरकारले गर्यो कोराना महामारीका बेला बच्चा जन्माउनेलाई पुरस्कार दिने घोषणा ? - News21Nepal
सरकारले गर्यो कोराना महामारीका बेला बच्चा जन्माउनेलाई पुरस्कार दिने घोषणा ?
November 9, 2020 news21nepalLeaveaComment on सरकारले गर्यो कोराना महामारीका बेला बच्चा जन्माउनेलाई पुरस्कार दिने घोषणा ?
कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र एक हिसाबले तहसनहस बनिरहेको छ । कैयन् व्यापार व्यवसायहरु धरासायी बनिरहेका छन् भने करोडौँ मानिसको रोजगारी गुमेको छ । विभिन्न देशका सरकारहरुले समेत टाट पल्टिन लागेको बताउन थालेका छन् ।
कोरोना भाइरस महामारीले रोजगारी तथा व्यवसायबाट हात धुनुपरेको र हातमुख जोर्नसमेत धौधौ हुन लागेको अवस्थामा धेरै मानिसका पारिवारिक योजनाहरु समेत लथालिङ्ग बनिरहेका छन् । कतिपयले बिहे गर्ने तथा बच्चा जन्माउने योजनासमेत पर सारेका होलान् यतिबेला ।
स्मरण रहोस् सिंगापुर विश्वमा सबैभन्दा कम जन्मदर भएको मुलुक हो । जहाँ जन्मदर बढाउनका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर निरन्तर कोसिस गर्दै आएको छ। एजेन्सि को सयोग मा
Tagged सरकारले गर्यो कोराना महामारीका बेला बच्चा जन्माउनेलाई पुरस्कार दिने घोषणा ?
तपाईंको आजको दिन कस्तो छ ? आज कार्तिक २४ गते सोमबारको पूरा रासिफल हेर्नुहोस ।
नेप्से र कारोबार रकम दुबै बढयो , अधिकांस कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट ?
अमेरिकी रास्ट्रपति ,निर्वाचन : बाइडन ‘जित नजिक’, अदालती प्रक्रियामा गए ट्रम्प,यस्तो छ अहिले सम्मको अन्तिम परिणाम ।
November 5, 2020 news21nepal
मदरसामा बम बिस्फोट, ८ जनाको मृत्यु